Madaafiic Lagu Garaacay Garoonka Diyaaradaha Kismaayo. – Calamada.com
Madaafiic Lagu Garaacay Garoonka Diyaaradaha Kismaayo.
Saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey tiro madaafiic ah ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada hoose.
Tiro madaafiic ah ayaa la xaqiijiyay iney gudaha u galeen garoonka oo difaacyo iyo saldhigyo ay ka sameysteen ciidamada Nasaarada Kenya oo qeyb ka ah shisheeyaha kusoo duulay Konfurta iyo bartamaha dalka Somali.
Dhawaaqa madaafiicda ayaa si aad ah looga maqlayay xaafadaha magaalada Kismaayo iyo qeybo ka mid ah duleedka magaalada walow si rasmi ah aan loo xaqiijin karin khasaaraha ciidamada Kenya kasoo gaartay duqeyntaasi.
Sidoo kale ciidamada Kufaarta Kenya ayaa dhankooda madaafiic jawaab ah waxey ku garaaceen deegaanada howdka ah ee dhaca duleedka magaalada Kismaayo mana jirta wax dad iyo xoola ah oo waxyeela ay kasoo gaartay madaafiicda Kufaarta Kenya.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa si xiriir ah madaafiic ugu garaaca saldhigyada shisheeyaha’iyadoona dhawaan ay aheed markii ciidamada Xarakada Alshabaab madaafiic ku garaaceen xerada Xalane oo ah saldhiga ugu weyn Kufaarta Afrikaanta kaasi oo ku dhex yaala garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 28-07-1437 Hijri.
Next: Mujaahidiinta YEMEN Oo Fariin Adag U Diray Dowladaha Isbaheysiga Iyo Maleeshiyaatka La Shaqeeya.